Female Cardigan - nezingubo Ideal for Ladies zanoma iyiphi iminyaka futhi iyiphi complexion
Lapho kuqala entwasahlobo abesifazane lovely ngokuvamile sizoshwabana ebunzini lakhe uphoxeke. Ebusika sibalo washintsha, sihlezi ukugqoka! Mayelana kwesisindo, yebo, iphupho zonke omele wobulili bubuhle, kodwa - inqubo eside. Indlela kukhanye up the sibalo namuhla ... kahle, hhayi ngempela ephelele.
Hhayi ukuthi ukuze kukhanye up, futhi indlela ukuhlobisa, ukugcizelela isithunzi - yilokho umbuzo okufanele intokazi zanoma iyiphi iminyaka nangezinkinga Yakha. Bonke abesifazane mihle ngendlela yabo, wena nje kudingeka sazi ukuthi singaphila kanjani ukuba uzinikele!
Mhlawumbe kwakungekhona abaklami ukucabanga imfashini ngubani beveza basikhohlwa zonke izingubo ngokuqondene - Cardigan zesifazane. Intombazane usinamathelise ngendlela imodeli ezikubambayo kuzoba ngisho izacile, ikakhulukazi uma okhalweni yakhe zokuphola iboshelwe ibhande wathungela noma ngashona ibhande ezibanzi. By the way, kubukeka ibhande langa okhalweni, okubi ukuze ehle okhalweni.
pyshechki Chubby sihle uma Cardigan zesifazane, lapho wagqoka ngokwabo, kunalokho ezijulile neckline V emise ngashona kwenye inkinobho engenhla enkulu. amabele amahle, ezizobonakala ekhosombeni, kunemiphumela emibi edlula zonke sibalo icatshangwe amaphutha, uma ngisho nendawo ukuba. Nakuba abesifazane abaningi ukhuluphele futhi ngaphezu amabele amahle unokuthile agabise ... Yiqiniso, uma kancane kakhulu esiswini, akudingekile ukugcizelela. Kodwa uma usuthi ezikhethekile, ungakwazi ukugqoka Cardigan abesifazane isitayela yokuthi ugcizelela Curves eqinisweni eziyengayo sibalo.
Kuyihlazo nje eyodwa ingaba yiqiniso: ukuthenga Cardigan manje imfashini besifazane kungaba nzima ngempela. Well, futhi kusukela ngalolo isikhundla ungahlala ukuthola indlela yokuphuma! Phela, namuhla, ikakhulukazi owesifazane spokes Cardigan obumbene ntambo! Ingabe thina wesaba naphezu kobunzima? Uma ufuna ukuba amahle, uthandeka kakhulu futhi lovely, ngisho kuze kube kudlula efanayo lonke ozinikezele emhlabeni futhi ngenalithi - imashi for izinaliti nokotini! Ake zesifazane Cardigan obumbene nge izinaliti!
Okokuqala udinga ukukhetha imodeli afanele ngoba befuna ngibenzele okuthile esikhathini esizayo. Ungakwazi ukunikeza lowo uzosebenzisana cishe njalo omele wobulili bubuhle. Lokhu Cardigan ngaphandle izinkinobho ukuthi phambi nje eshayisa futhi abopha ibhande. enhle kakhulu lento ezihambisana melange ntambo uhlobo ke inethiwekhi akuyona into engasho lutho ngombala owodwa, njengalapho imibala abaningi ntambo okuxubile.
Melange ntambo kungaba uthenga ngomumo eyenziwe noma uzenze. Ngokwesibonelo, inkosikazi ethile ukonga kungaba chaza ezinye izinto ezahlukene emfashinini noma agugile. Ukuthatha amathiphu wentambo ezondile imibala eyahlukene, kufanele emuva kubo ibe ibhola. Kungenzeka futhi ukuba ngibophe abanhliziyo ngentambo ezinemibala yanjalo uma ukushuba ofanayo. Inhlanganisela ungakwazi nhlobonhlobo: ensundu blue, oluhlaza nge pink, marsh ephuzi. Into esemqoka ukuthi imibala abangeqile kwabathathu ayesetshenziswa umkhiqizo.
Ubopha kungaba futhi silula, isibonelo, wembatha itshali, okungukuthi, lapho uchwepheshe lodwa phambi ngibopha nhlangothi zombili. Lapho senza emashalofini kufanele enze olubanzi ibha 2x2 nokunwebeka. Ngemva eshalofini kuzodlula phezu umugqa okhalweni, collar kufanele ikhishwe - Schalke, okungukuthi, baqala ukwandisa bar. Ngemva kokuvalwa emahlombe, entanyeni izihibe akudingeki ivalwe, bese uqhubeke kuze kube maphakathi no emuva. Kamuva, emhlanganweni imikhiqizo, onqenqemeni aphumele ithungwe ukuba neckline ngemuva umkhiqizo.
Ikakhulukazi Kuyaphawuleka kukhona sleeves lokhu model. Kunconywa ukuba qala ngokwenza enjoloba band 2x2 cuffs ububanzi - cuffs. Khona-ke nomunye emaphethelweni cuff iluphu inzuzo futhi siqhubeke obumbene e garter Stitch. Imikhono i emincane.
Emaphaketheni abathola isahlulelo e ohlangothini ezivuzayo zenziwa noma phezulu. Kodwa imodeli eyamukelekayo ngempela owenza ngaphandle emaphaketheni. Ibhande nayo ilingane band zenjoloba, kahle, uma zizongena ububanzi strip eshalofini. Ibhande kufanele kwenziwe eside ngemva okuhlanganisa ke hang ngezansi emaphethelweni sihloko.
Umsila wenkomo imimese. Sebenzisa futhi production ozimele
Tilda Tulip ngezandla
Tilda: umlando ukuvela, ukuthandwa global wezimfihlo ukuthunga, amaphethini onodoli
Ingabe ikhona umngcele phakathi Russia nase Belarus?
Indlela hlola ikhoyili ukuthungela
I-Tablet amabhuleki kubangela izilungiselelo, unqulo wesi arab kuphela, isofthiwe
Kusukela sizogqokani sundress nelineni?
Indlela ukhumbule iphasiwedi kusuka kusayithi VKontakte?
Image-Halloween for girls: Khetha impendulo yakho!
Ilayisi: "100 amagremu - lena kangakanani?" Noma "in the course nezinkezo kanye izibuko"